Kaniisaddu waa maxay? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Baybalku wuxuu leeyahay: Ku alla kii Masiixa rumaystaa wuxuu qayb ka noqonayaa "kaniisada" ama "kaniisada".
Waa maxay, "kaniisadda", "kaniisadda"? Sidee loo abaabulaa? Waa maxay ujeedadu?
Ciise wuxuu dhisaa kaniisaddiisa
Ciise wuxuu yidhi: Waxaan rabaa inaan dhiso kaniisaddayda (Matayos 16,18). Kaniisadda ayaa muhiim u ah isaga - wuu jeclaaday iyada si aad ah oo naftiisii ​​u bixisay iyada (Efesos 5,25). Haddii aan isaga la mid nahay, waan jeclaan doonnaa kaniisadda oo nafteena isu siin doonnaa. Kaniisadda ama kiniisadda waxaa laga turjumay Giriigga ekklesia, oo macnaheedu yahay isu imaatin. Falimaha Rasuullada 19,39: 40 ereyga waxaa loo adeegsaday macnaha isu imaatinka dadka. Masiixiyiinta, ekklesia waxay qaadatay macno gaar ah: dhammaan kuwa rumeysan Ciise Masiix.
Meesha uu u isticmaalay ereyga markii ugu horeysay, Lukas wuxuu qoraa: "Waxaa jirtay cabsi weyn oo ka jirtay bulshada oo dhan ..." (Falimaha Rasuullada 5,11). Maaha inuu sharxo micnaha eraygu; akhristayaashiisa ayaa horey u ogaa. Waxay tilmaamaysaa dhammaan Masiixiyiintii, maahan keliya kuwa meeshan ku urursaday waqtigaas. "Kaniisad" macnaheedu waa kaniisadda, waxaa loola jeedaa dhammaan xerta Masiixa. Beel dad ah, oo aan dhisme ahayn.
Kaniisadda sidoo kale waxaa loola jeedaa kulamada Masiixiyiinta ee maxalliga ah. Bawlos wuxuu u qoray "kaniisadda Ilaah ee Korintos" (1 Korintos 1,2); wuxuu ka hadlayaa "dhammaan jameecada Masiixa" (Rooma 4,16). Laakiin sidoo kale ereyga wuxuu u adeegsadaa sidii magaca wadajirka ah ee dhammaan rumaystayaasha markii uu leeyahay "Masiixu wuu jeclaa kaniisadda oo naftiisa u bixiyay" (Efesos 5,25).
Kaniisadda ayaa heerar badan leh. Hal heer ayaa ah kaniisadda guud, oo ay kujirto qof kasta oo dunida jooga oo qirta Ciise Masiix inuu yahay Badbaadiye iyo Badbaadiye. Heerar ka duwan ayaa ah bulshooyinka maxalliga ah, bulshooyinka dareenka cidhiidhi ah, kooxo goboleed dad ah oo si joogto ah u kulma. Heerka dhexe ayaa ah aayaha ama sheegashada, kuwaas oo ah kooxo beel oo ka wada shaqeeya taariikh wadaag iyo caqiido.
Kaniisadaha maxalliga ah mararka qaarkood waxaa ka mid ah kuwa aan rumaysadka lahayn - xubnaha qoyska ee aan ku andacooneynin inuu Ciise yahay Badbaadiyaha laakiin weli ka qeybqaata nolosha kaniisadda. Waxa kale oo ku jiri kara dadka u malaynaya inay yihiin Masiixiyiin laakiin iyagu iskood isu khiyaanaynaya. Khibradda waxay muujineysaa in qaar ka mid ah ay markii dambe qirteen inaysan ahayn Masiixiyiin dhab ah.
Maxay tahay sababta aan ugu baahan nahay kaniisadda
Dad badani waxay naftooda ku qeexaan inay yihiin Masiixiyiin rumeysan, laakiin ma doonayaan inay ku biiraan kaniisad kasta. Tan sidoo kale waa in lagu sharxaa qaab qaab aan sax ahayn. Axdiga Cusubi wuxuu muujinayaa in kiiska caadiga ahi yahay in rumaystayaasha ka tirsan yihiin urur (Cibraaniyada 10,25).
Mar labaad iyo mar kale Bawlos wuxuu Masiixiyiinta ugu yeedhay midba midka kale iyo midba midka kale, inuu isu adeego, oo loo wada shaqeeyo (Rooma 12,10:15,7; 1; 12,25 Korintos 5,13; Galatiya 4,32; Efesos 2,3; Filiboy 3,13; Kolosay 1; 5,13Tus). Raacitaanka rafcaankan badanaa waa wax aan macquul aheyn loner-kan aan rabin inuu u dhawaado rumaystayaasha kale.
Kaniisad ayaa ina siin karta dareen ah ka mid ahaansho, dareen ah wadajir Christian. Waxay ina siin kartaa ugu yaraan xasillooni xagga ruuxiga ah si aannaan qalloocin fikradaha qariibka ah. Kaniisad ayaa ina siin karta saaxiibtinimo, bulshada, dhiirigelin. Waxay na bari kartaa waxyaabo aanan annaga is baran laheyn. Waxay gacan ka geysan kartaa korinta carruurteenna, waxay naga caawin kartaa inaan si waxtar leh ugu adeegno Ilaah, waxay na siin kartaa fursado aan ugu adeegno bulsheed aan ku korayno, badiyaa siyaabo aan la qiyaasi karin.
Isku soo wada duuboo waxaa la dhihi karaa: Faa'iidada ay bulshada na siiso waa mid u dhiganta balan qaadka aan maalgashano. Laakiin malaha sababta ugu muhiimsan ee qofka mu'minka ah ee kaniisadda ugu biiraya ay tahay: kaniisadda ayaa na baahan. Ilaah wuxuu hadiyado kala duwan siiyay mu'miniinta shakhsi ahaaneed wuxuuna doonayaa in aan ka wada shaqeyno "danta dadka oo dhan" (1 Korintos 12,4: 7). Haddii kaliya qayb ka mid ah xoogagga shaqadu ay ka muuqato shaqada, waa layaabna ma aha in Kaniisaddu aysan sameynin intii la rajeynayey ama aannan u caafimaad qabin sidii la rajeynayay. Nasiib darrose, dhaleecaynta ayaa u fudud qaar ka mid ah caawinta.
Kaniisaddu waxay u baahan tahay waqtigeenna, xirfadaheena, hadiyadeheenna. Waxay u baahan tahay dad ay ku kalsoon tahay - waxay u baahan tahay dadaalkeena. Ciise wuxuu u yeedhay inuu tukado shaqaalaha (Matayos 9,38). Wuxuu doonayaa midkeen kasta inuu wax ka qabto oo uusan ku ciyaarin kaliya aragtida muuqaallaha ah. Haddii aad rabto inaad noqoto Masiixi la'aan kaniisad, ma u adeegsaneyso xooggaaga sida aan ugu qasbanahay inaan u isticmaalno sida ku xusan Kitaabka Quduuska ah, taakuleynta Kaniisaddu waa "beel iskaashi ah oo iskaashi ah" waana inaan is caawino annagoo og in maalintaasu imaan karto (haa waa horeba way timid) inaan u baahan nahay inaan is caawino.
Kaniisad / Bulsho: sawirro iyo astaamo
Kaniisadda ayaa siyaabo kaladuwan looga hadlay: dadka Ilaah, qoyska reerka, aroosadda Masiixa. Waxaan nahay dhisme, macbud, jir. Ciise wuxuu nooga hadlay sidii ido, iyo sidii beero beero canab ah. Mid kasta oo ka mid ah calaamadahani waxay muujinayaan dhinac kale oo kaniisadda ah.
Masalooyin badan oo boqortooyadii ka soo baxay afkiisa Ciise ayaa ka hadla kaniisada. Kaniisadda waxay ka bilaabantay wax yar oo weynaatay sida iniin khardal le'e (Matayos 13,31: 32). Kaniisaddu waa sida dhul ay haramaha uga soo baxaan hadhuudhka (Aayadaha 24-30). Waa sida shabeel ku jira kalluun wanaagsan iyo sidoo kale kuwa xun (Aayadaha 47-50). Waxay u eg tahay sidii geed canab ah oo ay qaarkood ku shaqeeyaan wakhti dheer, qaar waxay shaqeeyaan oo keliya wakhti yar (Matayos 20,1: 16). Waxay la mid tahay midiidinnadii sayidkoodii aaminay oo maalgeliyey qayb ahaan si wanaagsan iyo qayb ahaan xun (Matayos 25,14: 30). Ciise wuxuu isku magacaabay Isaga oo ah Adhijirka iyo xertiisa (Matayos 26,31); shaqadiisu waxay ahayd inuu helo ido lumay (Matayos 18,11: 14). Wuxuu ku tusay rumaystayaashiisa inay yihiin ido u baahan in daaqa lana daryeelo (Yooxanaa 21,15-17). Bawlos iyo Butros sidoo kale waxay adeegsadaan calaamaddan waxayna leeyihiin hoggaamiyeyaasha kaniisaddu waa inay "daaqaan adhiga" (Falimaha Rasuullada 20,28:1; 5,2 ​​Butros).
Waxaan nahay "dhismaha Ilaah", ayuu Bawlos ku qoray 1 Korintos 3,9. Aasaaska waa Masiixa (Aayadda 11), dhismaha aadanaha ayaa ku tiirsan. Butros wuxuu noogu yeedhay "dhagxan nool, oo loo dhisay guriga ruuxiga ah" (1 Butros 2,5). Wadajir ayaa naloo dhisay "rugta Ilaah xagga Ruuxa" (Efesos 2,22). Waxaan nahay macbudkii Ilaah, oo ah macbudkii Ruuxa Quduuska ahu (1 Korintos 3,17:6,19;). Ilaah waa lagu caabudi karaa meel kasta; laakiin kaniisaddu waxay leedahay cibaadada oo macnaheedu yahay udub dhexaadka.
Waxaan nahay "dadka Ilaah", ayaa inoo sheegay 1 Butros 2,10. Waxaan nahay waxa ay ahayd in reer binu Israa'iil ay ahaadaan: "qabiilkii la doortay, wadaadnimada boqornimada, dadka quduuska ah, dadka hantida leh" (Aayadda 9; eeg Baxniintii 2: 19,6). Waxaan iska leenahay Ilaah maxaa yeelay Masiix wuxuu nagu iibsaday dhiiggiisa (Muujintii 5,9). Waxaan nahay carruurta Ilaah, isagu waa aabbahayo (Efesos 3,15). Caruur ahaan ahaan, waxaa nala siiyay dhaxal aad u wanaagsan, waxaana nalaga rabaa inaan ka farxinno oo aan maamuusno magaciisa.
Qorniinku sidoo kale wuxuu noogu yeedhaa aroosadda Masiixa - erey ka tarjumaya sida uu Masiixu noo jecel yahay iyo waxa isbeddello baaxad leh naga dhex jira si aan xiriir wanaagsan ula yeelanno Wiilka Ilaah. Qaar ka mid ah sheekooyinkiisa, ayuu Ciise ku casuumay dadka arooska; halkan waxaa nalagu casuumay inaan noqono aroosadda.
Aynu rayrayno oo faraxno oo aynu ammaano isaga; maxaa yeelay arooskii Wanki wuu yimid, oo aroosadiisiina way diyaarisay. (Muujintii 19,7). Sidee ayaynu "u diyaarinnaa"? Iyada oo hadiyad leh: "waxaana la siiyay iyada in ay ku labisto maro wanaagsan oo daahir ah" (Aayadda 8). Masiixu wuxuu inaga nadiifiyaa "maydhashada biyaha ee erayga" (Efesos 5,26). Isagu kaniisadda ayuu u soo bandhigayaa ka dib markii uu ka dhigay mid sharaf leh oo wax tar leh, oo quduus ah oo aan eed lahayn (Aayadda 27). Way naga shaqaysaa.
Astaamaha sida ugu fiican u tilmaamaya sida kaniisadaha u dhaqmayaan midba midka kale waa kan jirka. Bawlos wuxuu qoray, "Laakiin waxaad tihiin jidhka Masiixa, oo midkiin waluba waa ka tirsan yahay" (1 Korintos 12,27). Ciise Masiix "waa madaxa jirka, kaniisada" (Kolosay 1,18), innaguna waxaan nahay addin. Markaan la mideysan nahay Masiixa, waxaan sidoo kale midaysanahay midba midka kale, waana ka go'an nahay midba midka kale - dareenka ugu macquulsan. Ma jiro qof dhihi karo "Uma baahni" (1 Korintos 12,21), qofna ma dhihi karo inuusan wax shaqo ah ku lahayn kaniisadda (Aayadda 18). Ilaahay hadiyadeheena ayuu u qaybiyaa si aan uga wada shaqeyn karno is-fahan iyo is-caawinta oo aan helno caawinaadda iskaashigan Waa inaanu jirku “kala qaybsanaan” lahayn (Aayadda 25). Bawlos had iyo jeer wuxuu ku kacdaa falal lid ku ah ruuxa xisbiga; kuwa beenta abuuraya waa in laga reebaa bulshada dhexdeeda (Rooma 16,17; Tiitos 3,10-11). Ilaah wuxuu kaniisadda ka dhigaa "in dhinac walba ku weynaato" by "xubin kasta wuxuu taageeraa kan kale marka loo eego xooggiisa" (Efesos 4,16). Nasiib darrose, adduunyada masiixiga waxaa loo qaybiyaa reero kuwaas oo had iyo goorba khilaaf ka dhexeeyo. Kaniisad wali ma dhameystirna maxaa yeelay xubnaheeda midkoodna kaamil ma aha. Si kastaba ha noqotee: Masiixu wuxuu doonayaa kaniisad keliya (Yooxanaa 17,21). Tan macnaheedu maahan inay ka dhigan tahay midnimo urur, laakiin waxay ku salaysnaanaysaa hadaf guud. Midnimada dhabta ah waxaa kaliya lagu heli karaa iyadoo la isku dayo in mar uun loo sii dhowaado Masiixa, laguna wacdiyo Injiilka Masiix, lana noolaado mabaadi'da Hadafku waa inaan faafino annaga lafteena, hase yeeshe, lahaanshaha diimo kaladuwan sidoo kale waxay leedahay faa iidooyin: Siyaabo kala duwan, farriinta Masiixu waxay ku gaartaa dad badan qaab ay fahmi karaan.
Waxaa jira seddex qaab oo aasaasi ah oo kaniisad dhisme iyo dastuur u ah dunida masiixiga ah: kala sareyn, dimoqoraadiyad iyo wakiil. Waxaa loo yaqaannaa episcopal, dawladda-hoose iyo presbyterial.
Nooc kasta oo aasaasi ah ayaa leh noocyadeeda, laakiin mabda'a ah qaabka loo yaqaan 'episcopal model' waxaa loola jeedaa in adhijir madax ahi uu leeyahay awoodda go'aaminta mabaadi'da kaniisadda iyo in la amriyo wadaadada Qaabka golaha, bulshooyinka laftooda ayaa go'aamiya labadan arrimood: Nidaamka presbyterial, awoodda ayaa loo kala qaybiyaa hooseeya iyo bulshada; odayaasha ayaa la doortaa oo lasiiyaa xirfado.
Axdiga Cusubi ma qoro kaniisad gaar ah ama qaab kaniisad. Waxay ka hadlaysaa kormeerayaasha (Bishoadiyo), odayaal iyo adhijirro (Wadaaddada), in kasta oo magacyadaas rasmiga ahi ay u muuqdaan kuwo si isku-beddel ah looga beddeli karo. Butros wuxuu odayaasha ku amrayaa inay u dhaqmaan sidii adhijir iyo kormeere: "Daaji adhiga ... iska ilaali" (1 Butros 5,1-2). Si la mid ah ereyada, Bawlos wuxuu odayaasha siiyaa tilmaamo isku mid ah (Falimaha Rasuullada 20,17:28 iyo).
Beesha Yeruusaalem waxaa hogaaminayay koox odayaal ah; kaniisadda si Filibiin ah ee hoggaamiyaha kiniisadda (Falimaha Rasuullada 15,1: 2-1,1; Filiboy). Bawlos wuxuu uga tegey Tiitos xaggii Kalaetee inuu isagu odayaasha halkaas geeyo. Wuxuu qoraa hal aayad oo ku saabsan odayaasha iyo dhowr ku saabsan kiniisadaha sida haddii ay ereyo isku mid ah u yihiin hoggaamiyeyaasha bulshada (Tiitos 1,5-9). Warqadda in Cibraaniyada (13,7, Menge iyo Elberfeld Bible) hogaamiyaasha bulshada waxaa si fudud loogu magacaabaa "hogaamiyayaal". Halkaa markan Luther wuxuu tarjumaa “hogaamiye” macalin “macalin”, erey sidookale badanaa muuqan (1 Korintos 12,29:3,1; Yacquub). Naxwaha ee Efesos 4,11 wuxuu muujinayaa in “adhijirka” iyo “macallimiinta” ay isku koox yihiin. Mid ka mid ah aqoonta ugu weyn ee saraakiisha bulshada waxay ahayd inay noqdaan ... ... awood u leh inay dadka kale wax barto " (2Tim2,2).
Isku-darka guud, waa in la ogaadaa: hoggaamiyeyaasha bulshada ayaa la magacaabay. Waxaa jiray tiro cayiman oo ah abaabulka bulshada, in kasta oo magacyada rasmiga ah ee rasmiga ah ay muhiimad sare lahaayeen. Xubnaha waxaa laga rabay inay muujiyaan ixtiraam iyo adeecid saraakiisha (1 Tesaloniika 5,12:1; 5,17 Timoteyos 13,17; Cibraaniyada).
Haddii odaygu wax qalad ah ku arko, kiniisaddu waa inaysan addeecin; hase yeeshe, kaniisada ayaa sida caadiga ah la filayaa inay taageerto odayaasha. Maxay odayaashu qabtaan? Waxaad tahay madaxa bulshada (1 Timoteyos 5,17). Waxay daaqaan daaqsiga, waxay ku hogaamiyaan tusaale ahaan iyo barida. Waxaad daawanaysaa adhiga (Falimaha Rasuullada 20,28). Maaha inay kaligood xukun u xukumaan, laakiin ay u adeegaan (1 Butros 5,23), “si ay quduusiintu ugu diyaar garoobaan shaqada loo adeegayo. Sidan ayaa ah sida loo dhiso jidhka Masiixa " (Efesos 4,12) Sidee odayaasha loo go'aamiyaa? Waxaan helnaa macluumaad xaalado dhawr ah: Bawlos wuxuu isticmaalaa odayaasha (Falimaha Rasuullada 14,23) waxay soo qaadanaysaa in Timothy uu magacaabayo kiniisado (1 Timoteyos 3,1: 7), iyo wuxuu awood u siiyay Titus inuu magacaabo odayaasha (Tiitos 1,5). Si kasta oo ay ahaataba, kiisaskaas waxaa ka jiray maamul hoose. Annagu kama helin wax tusaale ah oo ah bulshada doorta odayaasheeda lafteeda.
Si kastaba ha noqotee, Falimaha Rasuullada 6,1: 6 waxaan ku aragnaa sida loogu yeedhay ragga saboolka ah ee kiniisadda loo xushay. Nimankaas waxaa loo xushay inay cunto u qaybiyaan kuwa baahan, markaasay rasuulladii siiyeen xafiiskan. Tani waxay u oggolaatay rasuulladii inay xoogga saaraan shaqada ruuxiga ah sidoo kalena shaqada jireed ayaa sidoo kale la qabtay (Aayadda 2). Farqiga u dhexeeya shaqada kaniisadda iyo jir ahaanta waxaa sidoo kale laga heli karaa 1 Butros 4,10: 11.
Saraakiisha shaqada gacanta ku haysa waxaa badanaa loogu yeeraa hogaamiyayaal, sida ku xusan cilmiga Griiga, si ay u adeegaan. Haweenka adeegayaasha sidoo kale waxaa lagu sheegaa ugu yaraan hal meel (Rooma 16,1).
Bawlos wuxuu ugu yeedhay Timoteyos dhowr tayo oo ay tahay inuu wadaadku lahaado (1Tim3,8-12) adigoon si sax ah u sheegin waxa adeeggoodu ka koobnaa. Sidaas darteed, diimaha kaladuwan waxay siiyaan adeegayaal hawlo kaladuwan, min min adeegayaasha hoolka ilaa xisaabaadka maaliyadeed.Waxa muhiimka u ah xafiisyada maaraynta maahan magac, qaab dhismeedkooda ama habka ay u buuxiyaan. Waxa muhiimka ahi waa macnahoodu iyo ujeeddadooda: in laga caawiyo dadka Eebbe qaan-gaadhkiisa "illaa iyo buuxnaanta Masiixa" (Efesos 4,13).
Masiixu wuxuu dhisay kaniisadiisa, wuxuu siiyay hadiyado iyo hanuun dadkiisa, oo wuxuu ina siiyay shaqo. Dareenka ugu weyn ee bulshada kaniisada waa cibaadada, cibaadada. Eebbe wuxuu noogu yeedhay "inaan ku dhawaaqo barakooyinka kuwa kaa yeedhay gudcurka xagga nuurkiisa yaabka leh" (1 Butros 2,9). Ilaah wuxuu raadinayaa dadku inay caabudaan isaga (Yooxanaa 4,23) Kuwa isaga ka jecel wax walba (Matayos 4,10). Wax kastoo aan sameynno, ha ahaato shaqsi ahaan ama bulsho ahaan, waa in had iyo jeer loo sameeyaa isaga (1 Korintos 10,31). Waa inaan "had iyo goor Ilaah ku ammaano" (Cibraaniyada 13,15).
Waa inaan: "Midba midka kale ku dhiirrigelinno gabayo iyo heeso iyo heeso ammaan ah" (Efesos 5,19). Markaan isu imaatinno kaniisad ahaan, waxaan u heesiaa ammaanta Ilaah, isaga ayaan u duceyneynaa oo eraygiisa maqalnaa. Kuwani waa qaababka cibaadada. Sidoo kale cashada, iyo sidoo kale baabtiiska, iyo sidoo kale addeecidda.
Dareenka kale ee kaniisadda waa waxbarista. Waxay xuddun u tahay amarada howlgalka: "... bar iyaga inay dhawraan wax kasta oo aan kugu amrayo inaad samayso" (Matayos 28,20). Hoggaamiyaasha kaniisaddu waa inay wax baraan, xubin walbana waa inuu bariiyaa kuwa kale (Kolosay 3,16). Waa inaan midba midka kale dhiirrigelinno (1 Korintos 14,31:1; 5,11 Tesaloniika 10,25; Cibraaniyada). Kooxo yaryar ayaa ah qaabdhismeedka ugufiican ee taageeradan iyo waxbarida.
Kuwa hadiyado ka raadiya Ruuxa ayaa leh Bawlos waa inuu ku dadaalaa dhismaha kaniisadda (1 Korintos 14,12). Hadafku waa: dhisid, waano, xoojin, raaxo (Aayadda 3). Wax kasta oo ka dhaca golaha waa in ay u dhisaan bulshada (Aayadda 26). Waa inaan noqono dhalinyaro, dad yaqaanno Erayga Eebbe oo adeegsanaya. Masiixiyiintii hore waxaa lagu amaaney inay ahaayeen “joogto” waxbarista rasuulladii iyo bulshada dhexdeeda iyo goos gooskii iyo ducada. (Falimaha Rasuullada 2,42).
Dareenka saddexaad ee bulshada waa “adeegga bulshada”. "Sidaas darteed ... aynu wax walba u wanaagsanaanno, laakiin inta badan kuwa la shaqeeya iimaanka," Bawlos ayaa dalbaday (Galatiya 6,10). Walaacayaga koowaad waa qoyskeena, ka dib bulshada iyo ka dib adduunka adduunka nagu xeeran. Amarka labaad ee ugu sarreeya waa: deriskaaga jeclaada (Matayos 22,39). Adduunkeenu wuxuu leeyahay baahi badan oo jireed mana aha inaynaan iska indho tirin. Laakiin inta ugu badan, waxay u baahan tahay injiilka, oo annaguna ma iska indho tiri karno arrintaas. Iyadoo qayb ka ah “adeegga bulshada”, kaniisaddu waa inay ku wacdisaa injiilka badbaadada xagga Ciise Masiix. Ma jiro urur kale oo shaqadan qabta - waa mas'uuliyadda Kaniisadda. Shaqaale kasta ayaa loo baahan yahay - qaarna "hore", qaar kalena "masraxa". Beeridda qaar, qaar bacrin ah, kuwa kale goosashada; haddii aan si wadajir ah u shaqeyno, Masiixu wuxuu kadhigi doonaa Kaniisadda (Efesos 4,16).